SomaliNet Magazine: BARNAAMIJKA XIDDIGAHA - CUMAR RINGO
Taariikhdu waxaa ay xusaysaa in dalkeenna Soomaaliya uu magac iyo maamuusba ku leeyahay noocyada ciyaareed ee kala duwan sida: kubbadda cagta, Kubbadda koleyga , Ciyaaraha fudud iyo kubbadda Miiska. Iyada oo ay noocyadaasi ciyaareed jireen ayaa haddana waxaa mar walba ka dhex muuqday dhallinyaro aan ku magacaabi karno xiddigo oo caan ku noqday noocyadaasi ciyaareed. Ciyaarta kubbadda koleyga oo iyadu ka mid ahayd ciyaarihii sida aadka ah uga hanaqaaday dalka Soomaaliya intii ka horreysay dhalashada kacaankii 21ka oktoobar iyo wixii ka dambeeyayba , ayaan oran karnaa durbadiiba waxey ku tallaabsatay horumar aad u ballaaran iyada oo ay soo baxeen ciyaaryahanno farsamadeedu sarreysay oo isugu jiray gabdho iyo wiilal, kuwaasi oo caan ku noqday kubbadda koleyga magac iyo sharafna u soo jiiday qaranka Soomaaliyeed.
Xubinteena maanta waxaa aynu ku soo qaadanaynaa ciyaaryahan Cumar Cismaan Waasuge oo dadka ciyaaraha jeceli badankoodu u yaqaaniin( Cumar Ringo). Cumar wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahannadii ugu wanaagsanaa kubbadda koleyga intii u dhaxaysay sannadihii 1970 kii ilaa 1976 kii , waxaana uu ku caan baxay naadigii la oran jiray College Orfano , markii dambena naadigii Dawladda Hoose \_"Munishiibiyo\_". Cumar wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahannadii ugu horreeyay ee loo xulo xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubbadda koleyga magaca qaranka Soomaaliyeedna uga qayb-gala ciyaaro caalami ah.?
Cumar wuxuu ku dhashay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan sannadku markuu ahaa 1952 kii, waxbarashadiisa dugsi quraanka wuxuu ku dhammaystay isla gobolkaasi, dabadeedna wuxuu u soo wareegay magaalada Xamar halkaas oo uu ka galay waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashadiisa dugsiga hoose wuxuu ku qaatay xamar-jajab, dugsiga dhexena iskuulkii Maritimo oo markii dambe loo bixiyay Badda, dugsiga sarena wuxuu ku qaatay Raage Ugaas. Cumar aqoontiisa guud waxaa ay gaarsiisan tahay heer jaamacadeed isaga oo ku takhasusay Biology iyo Physical Education.
Cumar intuu ku dhex jiray Isboortiga Soomaaliyeed wuxuu ka qayb-qaatay noocyo badan oo ciyaareed Sida kubbadda Laliska, kubbadda cagta , Dabaasha, kubbadda koleyga iyo Feerka. Markii dambena wuxuu u wareegay dhinaca tababaranimada kubbadda koleyga.Cumar haatan waa xaas leh 9 caruur ah ,wuxuuna ku nool yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haddaba waxaa ii suuro-gashay inaan Cumar ka waraysto taariikh nololeedkiisii isboorti , sidan ayuuna u dhacay:
Shiikha: ugu horreyn bal waxaad faahfaahin iga siisaa sida aad ku billowday ciyaaraha iyo cidda kugu dhiiri-galisay?
Cumar: Sideedaba isboortigu waa balwad aad u wanaagsan oo qofka yaraantiisa uu aad ugu fakiro iyada oo aan cidina ku hoggaamin. kubbadda cagta ayaan oran karaa inay ahayd ciyaartii ugu horraysay oo aan ku bilaabo ciyaarha aniga oo aad u da\_'yar oo markaasi joogay magaalada Baladweyne, waxaana u ciyaari jirnay kooxo kooxo aan wax sharci ah oo kala hagaya aysan jirin amaba aan habaysnayn, mana jirin cid markaasi aan ka helayay wax dhiiri-galin ah oo aniga ayaa is waday.
Shiikha: Goorma Ayey ahayd markii kuugu horreysay oo aad safato ciyaaro habaysan?
Cumar: 1966 kii ?1967 kii ayay ahayd markii iigu horreysay oo aan u saftay dugsiga dhexe ee Maritimo ciyaarta loo yaqaan kubbadda Laliska. Waxaa xusid mudan in tartankani uu ahaa tartankii ugu horreeyay ee ciyaaraha dugsiyada dhexe loo qabto oo ahaa mid habaysan Waxaana ku guulaysanay kaalinta 1aad.
Shiikha: Ciyaarta Kubbadda Koleyga iyada sidee ku billowday ?
Cumar: Isla sannadahaasi ayaan bilaabay ciyaarta kubbadda koleyga oo aan u saftay isla dugsiga dhexe ee Maritimo, waxaana ahayn kooxda kaliya ee ku ciyaaraysay magaca dugsiyada dhexe ee aan marnaba laga guulaysan ilaa aan soo gaarnay dugsiga sare.
Waxaa iyaduna mudan in la xuso Tababare Aadan Xirsi Jaamac oo loogu naanayso
(Adaamo), kana mid ahaa ciyaartooydii aan iskula jirnay kubbadda laliska ee dugsiga inuu ahaa ninkii iigu horreeyay ee ii bilaaba kubbadda koleyga aadna iigu dhiirri-galiyay.
Shiikha: Goorma ayaad ku biirtay ciyaaaryahannada heerka 1aad ee k/koleyga?
Cumar: 1969 kii ayay ahayd markii college Orfano loo oggolaaday inay ka mid noqoto kooxaha heerka 1aad, taas oo anigana ii suuro-galisay inaan xubin noqdo.
KOOXDII COLLEGE ORFANO
Kuwa taagan Bidix: Bisinka (allaha u Naxariisto), Cabdi Dibutaati, Seeyjanto, Isaaq iyo Cali Cusmaan. Kuwa Fadhiya Bidix:Bashiir Cawil, Faarax .kaynaan(allaha u Naxariisto), Cumar Ringo, Aarkey iyo Sarxaan Dheere.
Shiikha: Kooxihii kubbadda koleyga ee waqtigaasi jiray wax ma nooga sheegi kartaa?
Cumar: kooxahu way faro badnayeen waxaana ka mid ahaa: Xoogga, Boliiska, Circolo Centro Sportivo, Casa Italia oo iyagu ajnabi ahaa(Italy), Piece Corps oo iyagu ahaa koox Maraykan ah, Entec oo iyadu ka socotay Jaamacaddii Lafoole iyo kooxdii Orfano.
Waxaa xusid mudan in 1970 kii kooxihii Boliiska iyo Xoogga loo kala saaray labo kooxood oo loo kala bixiyay Dirir iyo Bakool. Markii dambana labadan kooxood waa la isku daray oo waxaa loo bixiyey naadigii Horseed oo isagu caan baxay.?
Shiikha: Koobabka lagu tartami jiray Dalkeenna Soomaaliya waxaa ugu qiimo badnaa Koobkii Jeneraal daa\_'uud iyo koobkii horyaalka. Haddaba u tartamidda koobabkani goorma ayaa asalkoodaba la bilaabay ?
Cumar: Waa su\_'aal aad u wanaagsan oo loo baahan yahay in jiilkii naga dambeeyay ay ogaadaan. 1970-kii ayay ahayd markii ugu horreysay oo u tartamidda labadaasi koob laga bilaabo dalka Soomaaliya.
Shiikha:Ma ka qayb-gashay Tartamadii Ciyaaraha kubbadda koleyga ee loogu tartamayay koobabkii Jeneral daa,uud iyo koobabkii Horyaalkaba??
Cumar: 1970- kii ayaan ka qayb-galay tartankii koobka Jeneraal daa\_'uud ee ugu horreeyay Soomaaliya oo aan ku guulaysanay kaalinta 2aad (Orfano), iyada oo ay kooxda Horseed ku guulaysatay kaalinta 1aad. sidoo kalena isla sannadkaasi waxaan ku guulaysannay kaalinta 1aad ee koobka Horyaalka oo isaguna ahaa koobkii ugu horreeyay.
Faarax wacays Dhuule oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka oo Koobkii?
Kaalinta 2aad ee Jeneraal Daa\_'uud Guddoonsiinaya Cumar Ringo \_"Orfano\_" 1970- kii?
Shiikha: Ma jireen tartamo ciyaareed ee kubbadda koleyga dugsiyada sare oo aad ka qayb-gashay? Wax guulo ahse ma gaareen kooxihii aad u ciyaaraysay?
Cumar: Waxaan ka qayb-galay tartamo faro badan oo ciyaaraha dugsiyada sare ah, guulihii ay gaareen kooxihii aan u ciyaarayayna waxaa ka mid ahaa:
1970- kii Dugsiga sare ee Dhagax-tuur Kaalinta 1aad
1971-1972 kii oo aan u soo wareegay Dugsiga sare ee Raage Ugaas Kaalinta 1aad
1973-1974 kii Dugsiga sare ee Raage Ugaas Kaalinta 1aad.
Waxaa iyaduna xusid mudan in 1971 kii la igu daray ciyaartooydii xulka dugsiyada gobolka Banaadir ugu firfircoonayd waxaana safarro ku soo bixinay degmooyin badan oo dalka Soomaaliya ka mid ahaa Sida ; Hargaysa, Camuud, Berbera, Burco, Waxaana meelahaasi aan booqanay ku ciyaarnay ciyaaro isugu jiray kubbadda cagta, K/koleyga iyo laliska oo isugu jiray gabdho iyo wiilal, sidoo kalena waxaanu goobahaasi ku soo bandhignay Barnaamij faneed ka hadlayaey dhaqanka Soomaalida.
La soco cadadyada dambe